unicode font Problem — MYSTERY ZILLION
unicode font Problem
မြန်မာစာဖောင့် ဇော်ဂျီကို ကျွန်တော် ယူနီကုတ်အစားထိုး သုံးလိုက်သောအခါ ဂျီတော့မှာ မြန်မာစာလည်း ဖတ်မရတော့ဘူး အိုင်အီးမှာလည်း မြန်မာစာကို ဖတ်မရတော့ဘူး
မော်ဇီလာမှာ ဖတ်ရသေးတယ်။ ဇော်ဂျီဖောင့်တွေကို အေးဆေးဖတ်ရပေမယ့် ရိုက်လို့မရတော့ဘူး။
ယူနီကုတ်နဲ့ လည်း ရိုက်တယ် အဲသည် ဇော်ဂျီကိုသုံးတဲ့ဘလော့တွေမှာ ဘာမှကို ဝင်ရိုက်လို့မရတော့ဘူးဗျာ အဲဒါ ကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတာလေး ဖောင့်၂ခု လုံးကို အသုံးပြုလို့ရမယ့် နည်းလေးများ ရှိခဲ့ရင် သင်ပေးကြပါဗျာ။
Unicode Install? What Installer? If you install Win Uni Innwa, all you need to do is to change fonts settings in all apps.
Keymagic ကိုသုံးလေ ...
ခု တော့ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါတယ်။
ကီးမတ်ဂျစ် ကလည်း ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးရှိသဗျ။
ခုဟာက နောက်ထွက်တွေ .၄.၀.နဲ့ ၁.၅.၁ နဲ့လည်း မရဘူး၊ ဗားရှင်း ၁.၃.၂ နဲ့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။